Aesthetic and Trendy Bios: Why They Matter? - XperimentalHamid
Biôstetika tsara tarehy sy lamaody: Nahoana izy ireo no manan-danja?
Jolay 26, 2021 by Sasha Gohar
Voalaza momba ny Internet fa toerana mety hitranga izany. Betsaka ny olona afaka manamarina izany.
Ny olona saro-kenatra ary tsy manana izay ilaina hatao mba ho tia mandray vahiny dia matetika no be hevitra sy ho avy amin'ny Internet.
Ireo no olona nanamboatra ny maha izy azy ary fantatry ny talenta izay tsy voamariky ny tontolon'ny vatana.
Manana mpanaraka an-tapitrisany sy mankafy ny toeran'ny demogod amin'ny Internet, ireo olona ireo dia namela ohatra harahin'ny hafa.
Bios ara-pahasalamana sy lamaody hampiaiky volana ny mpanaraka anao:
Ny manaitra ny mpanaraka anao amin'ny bios estetika sy lamaody dia tsy dia mafy loatra raha mieritreritra azy ianao.
Ny kofehy iraisana iraisan'ny olona malaza rehetra ao amin'ny media sosialy dia ireo biôsa tokana izay napetrak'izy ireo mba ho azon'ny mpanaraka azy. tsara kokoa.
Misy kosa ny olona izay tsy mahazo antoka izay hatao amin'ny habaka bio izay omen'ny tranonkala media sosialy. Matetika ireo dia olona tsy dia misy akony firy amin'ireo rindranasa ampiasainy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fiantraikan'ny biôsy amin'ny karapanondrotra sosialy ianao. Hizara santionany vitsivitsy koa aho izay mety hisy fiatraikany amin'ny persona amin'ny Interneto ankapobeny.
Rehefa avy mamaky ity lahatsoratra ity ianao dia ho afaka hanavaka ny ID manjavozavo amin'ny iray tena milay. Ho azonao atao ny mitarika ny tenanao hanana hery misimisy kokoa amin'ny alàlan'ny famoahana bio tsara tarehy, kanto ary lamaody ao amin'ny haino aman-jery sosialy.
Fa maninona no zava-dehibe ny biolojika fitiavam-bidy?
Alohan'ny hilazako aminao ny antony maha-zava-dehibe ny biôs, aleo aloha fantarintsika hoe inona ny bios ary inona no takiana amintsika mba hataontsika ao amin'io toerana io.
Ny bios dia fomba iray ahafahan'ny olona mitsidika ny piraofilinao hahafantatra anao. Toerana hanoratanao hoe iza ianao, inona no ataonao, ary maninona ianao no mendrika harahina.
Raha vita tsara, bio dia afaka manova ny fomba fijerin'ny hafa anao. Raha te-hanao an'izany dia takiana amin'ny mpampiasa azy ireo ho mpampiasa.
Ny habaka voafetra raha ampiasaina araka ny tokony ho izy dia afaka manintona ireo olona izay te hanana fifandraisana.
Bios momba ny hatsaram-panahy sy lamaody sasantsasany ho anao hahasarika olona maro kokoa:
Mba hanomezana anao hevitra momba izay azonao atao raha ny habaka biolojika dia misy sosokevitra vitsivitsy:
Tazomy ny halaviranao, izaho no olona tsy mahalala fomba tsara indrindra hitanao!
Isaky ny mahita anao aho dia mifankatia indray.
Na inona na inona azon'ny zazalahy atao, ny zazavavy afaka manao tsara kokoa.
Mianiana amin'ny fianianana aho fa izaho no tsara indrindra!
Aza atao ambanin-javatra ny herin'ny akanjo tsara amin'ny andro ratsy
Izaho no mafana indrindra fa tsy ny antony mampitsonika ranomandry any Antarctica.
Apetrako amin'ny psychotic ny mafana.
Mazava ho azy, hafahafa aho. Izaho no voalohany, hitanao.
Ary na dia mbola kely aza izy dia masiaka.
Ny lehilahy dia manana finiavana, fa ny vehivavy kosa manana ny fombany.
Raha tsy mitsiky aminao ny fiainana dia omeo tickling tsara.
Ny zazavavy tsy mangataka firy dia mendrika an'izany rehetra izany.
Ho very ny sainao manandrana mahatakatra ny ahy.
Nametraka ny fironako manokana aho.
Tsy mino ny fitiavana ve ianao? Angamba mbola tsy nifankahita isika!
Mianatra foana ny lesoka ataon'ny hafa izay naka ny torohevitro aho.
Hanentana anao ny tantarako ka aza hadino ny mamely an'io bokotra manaraka io
Hadisoana 400: tsy misy ny bio.
Hamaky bebe kokoa TikTok vs Youtube Fight Card
Araho aho mba hijery ambadiky ny seho amin'ny fiainako
Fantatra amin'ny gym aho amin'ny alàlan'ny "alohan'ny sary."
Sasa saina aho ary tsy ampy torimaso.
Hey, mamaky ny bio-nao indray ve ianao?
Mivelona amin'ny alàlan'ny tenako.
Andraso, aiza aho? Ahoana no nahatongavako teto?
Ka inona ny karazana bio izay nahaliana anao teo amin'ny lisitry ny 24 Bios? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Tian'ny tiana resahana? Ampio ny olona hahatratra olona maro kokoa:
Tsindrio ny hizara amin'ny Twitter (Manokatra amin'ny varavarankely vaovao)
Tsindrio ny hizara amin'ny Pinterest (Manokatra amin'ny varavarankely vaovao)
Tsindrio ny hizara amin'ny Facebook (Manokatra amin'ny varavarankely vaovao)
Tsindrio ny hizara amin'ny LinkedIn (Manokatra amin'ny varavarankely vaovao)
Tsindrio ny hizara amin'ny Reddit (Manokatra amin'ny varavarankely vaovao)
Tsindrio ny hizara amin'ny Tumblr (Manokatra amin'ny varavarankely vaovao)
Mifandraisa anjara amin'ny 25,144 hafa